Ny lalàna vaovaon'ny Vondrona Eoropeana dia mandrara ny mpitsidika tsy voavaksiny avy any ivelan'ny bloc
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny lalàna vaovaon'ny Vondrona Eoropeana dia mandrara ny mpitsidika tsy voavaksiny avy any ivelan'ny bloc
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny tolo-kevitry ny Vaomiera dia tsy maintsy ankatoavin'ny Filankevitra Eoropeana, ary raha lany dia mihatra amin'ny firenena EU rehetra afa-tsy Irlandy, izay tsy mpikambana ao amin'ny faritra Schengen tsy misy sisintany.
The Kaomisiona eropeana (EC), ny sampana mpanatanteraka ny vondrona Eraopeanina, dia namoaka tolo-kevitra androany, nanoro hevitra fa ny firenena mpikambana ao amin'ny UE rehetra dia mamela ireo mpandeha vita vaksiny, sitrana, na tena ilaina (toy ny mpamily kamiao) avy any ivelan'ny Vondrona Eoropeana, hatramin'ny martsa 2022.
Ireo mpitsidika ho avy dia mila manaporofo fa sivy volana talohan'ny nidirany no nanaovana vaksiny farany, hetsika izay tsy maintsy atao amin'ny ankamaroan'ny mpandeha ny tifitra booster.
Araka ny fitsipika vaovao naroso, ny mpitsidika dia mila tifitra booster isaky ny sivy volana.
The EU amin'izao fotoana izao dia manoro hevitra ny firenena mpikambana hamela ny mpandeha avy amin'ny lisitry ny firenena 20 mahery manana "toe-javatra misy areti-mifindra tsara". Ireo mpandeha avy amin'ireo toerana ireo - izay ahitana an'i Kanada, Nouvelle Zélande ary UAE - dia avela hiditra ao amin'ny EU miaraka amin'ny taratasy fanamarinana vaksiny, porofo momba ny fahasitranana, na porofon'ny fitsapana COVID-19 ratsy.
Eo ambanin'ny fitsipika vaovao dia hofoanana io lisitra io, ary ny mpandeha tsirairay dia navela hiditra amin'ny alàlan'ny vaksiny na ny toetry ny fahasitranana irery.
Amin'izao fotoana izao, ny European Medicines Agency (EMA) dia nankatoavin'ny Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ary Janssen. Ny Sputnik-V ao Rosia dia eo ambany fanaraha-mason'ny masoivoho, toy ny tifitra nataon'i Sanofi-GSK sy Sinopharm Shina.
Araka ny tolo-kevitra vaovao, ny vondrona Eraopeanina dia hanome fidirana ho an'ireo mpandeha natao vaksiny tamin'ny tifitra nankatoavin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), fa tsy ny EMA. Izany dia hanala izay rehetra voatsindrona amin'ny SInopharm, Sinovac, ary vaksiny roa vita amin'ny indiana mba hiditra, raha toa ka manome valim-panadinana ratsy izy ireo ary koa porofon'ny fanaovana vaksiny.
Manodidina ny 67% amin'ny EU Ny olom-pirenena dia manao vaksiny amin'ny COVID-19 amin'izao fotoana izao, na dia samy hafa aza ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny firenena tsirairay.
Na izany aza, na dia any Irlandy aza, izay manana tahan'ny vaksiny ambony indrindra ao amin'ny bloc amin'ny 93%, dia nitombo avo telo heny ny tranga vaovao isan-kerinandro momba ny viriosy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, ary ny governemanta irlandey dia mandinika fameperana vaovao amin'ny fiainana andavanandro.
"Miharihary fa tsy mbola tapitra ny areti-mifindra," hoy ny kaomisera eropeanina Didier Reynders tamin'ny alakamisy, ary nampiany fa "ny fitsipika fitsangatsanganana dia mila mandinika ity toe-javatra mikorontana ity."